Fanaovan-dalana : akora mahatanty rano ny compomac | NewsMada
Fanaovan-dalana : akora mahatanty rano ny compomac
Nampahafantarina, omaly, ny akora manokana ampiasaina compomac amin’ny fanamboaran-dalana. Mampiavaka azy, mahatanty orana, ka sahaza ny eto Madagasikara. Izany hoe, maharitra kokoa ny lalana satria fahavalo voalohany ny rano sy ny orana. Mampiasa azy ny orinasa Colas, ary naseho tetsy amin’ny minisiteran’ny Asa vaventy.
Vaovao ny akora compomac eto Madagasikara, fa efa 50 taona kosa nampiasana azy tany Eoropa. Manana teknolojia mitovitovy, mahatanty orana toy izao koa ny indianina ary efa naseho teto Madagasikara. Misy koa hafa, hafarana avy atsy Afrika Atsimo.
Dikany, maro ny teknika azo ampiasaina hampaharitra ny lalana, ka tokony hisy ny fifaninanana eo amin’ny vidiny. Miankina amin’ny finiavana politika sy fahaizana mandahatra ny laharam-pahamehana koa, anefa, izany. Singanina amin’izany, ny tsy mety ahavitan’ny lalam-pirenena faha-44 mankany Ambatondrazaka hatramin’izao, nefa 157 km monja.